सही प्याकेजिङ्ग उपकरण पार्टनर छनौट गर्न सक्नुहुन्छ जब तपाई ZhongLi मशीनरी कम्पनीलाई फोन गर्नुहुन्छ!
हाम्रो व्यापक उद्योग अनुभवको साथ एकल स्रोत प्याकेजिङ्ग समाधानको लागि विशेष दृष्टिकोण पत्ता लगाउनुहोस्। हामी तपाईंलाई तपाईंको प्याकेजिङ्ग मेशिन जीवनचक्रको सबै चरणहरूमा मार्गदर्शन गर्न सक्छौं। निम्नले हाम्रो सेवा प्रक्रियालाई चित्रण गर्दछ:
1 प्याकेजिङ्ग बिक्री र परामर्श
तपाईंको व्यापार आवश्यकताहरू पूरा गर्न सही उत्पादन छनौट सफलता र विफलता बीचको फरक फरक साटो हुन सक्छ। त्यसैले किन ZhongLi कम्पनी छान्नुहुन्छ?
हाम्रो ज्ञानयोग्य ईन्जिनियरिङ् र बिक्रीमा व्यापारमा 5-20 वर्षको अनुभव छ। तिनीहरूले एक विस्तृत सरणी परियोजनामा ​​काम गरेका छन्, साधारण प्याकेजिंग उपकरण अपग्रेडहरूमा सीमित बजेट संग, सबै भन्दा धेरै बहु मिलियन डलर सुविधाहरू सम्म। कुनै पनि कुराले तपाईको प्याकेजिंग उपकरण परियोजना कति सानो वा ठूलो, Zhongtai सफल उपकरण तैनाती सुनिश्चित गर्न ज्ञान र अनुभव प्रदान गर्न सक्छ।
2- प्याकेजिङ्ग मिसिन स्थापना सेवा
स्थापना सेवाहरू सबै नयाँ मर्मत खरिदहरू उपलब्ध छन्। तिनीहरू उपयुक्त संक्रमणको लागि प्राविधिक जानकारी कसरी प्रदान गर्नेछ र स्थापना, डिबगिङ, मेसिनको अपरेसनको भिडियोलाई समर्थन गर्दछ, यसले तपाईंलाई कसरी यो मेनु प्रयोग गर्ने संकेत दिन्छ।
3- प्याकेजिङ्ग मिसिन प्रशिक्षण सेवा
तपाईंको समाधानबाट सुरक्षित र कुशलतापूर्वक लगानी प्राप्त गर्नुहोस्। तपाईंको प्याकेजिङ उपकरण प्रणाली राम्ररी प्रयोग गर्न आफ्नो कर्मचारीलाई ट्रेन गर्नुहोस्। ZhongLi ग्राहक प्रशिक्षण प्रदान गर्दछ, सिकाउने कसरी कुशलतापूर्वक र सुरक्षित तरिकाले सिस्टम प्रयोग गर्ने साथै इष्टतम परिचालन उत्पादकता कसरी राख्ने भनेर सिकाउने।
4- बिक्री सेवा पछि
हामी जान्दछौं कि हाम्रा ग्राहकहरूले उनीहरूको प्याकेजिङ्ग उत्पादन अपरेसनमा आश्वासन पाउन आवश्यक छ! यसैले हामीलेसँग समर्पित सेवा विभाग छौँ। ZhongLi हाम्रो ग्राहकहरू र हामी उपलब्ध गराउने उत्पाद समाधानहरूको समर्थनको महत्त्वको बारेमा धेरै बलियो महसुस गर्दछ। फलस्वरूप हामी उपकरणको समस्याहरू रोक्नको लागि डिजाइन गर्न व्यापक मर्मत विकल्प प्रस्ताव गर्दछौं जब तिनीहरू समस्या हुन्थ्यो। पुरानो चलन अनुसार, रोकथामको औंस पाउन्ड उपचारको लायक छ!
कृपया हामीलाई कल गर्नुहोस् र इमेल गर्नुहोस्: NAME / MODEL / SERIAL NUMBER मेशिनको र विस्तारित त्रुटि सन्देश मेसिनको सन्देश .तपाईंको प्रस्तावित जानकारीको अनुसार, सेवा इन्जिनियरिङ वा मर्मतकर्ताले तपाईंलाई कसरी समाधान गर्न सक्दछ।
प्याकेजिङ्ग मिसिन अपग्रेड सेवा
तपाईंको अवस्थित प्याकेजिंग मशीनहरू अपग्रेड गर्न केही इकाइहरू वा प्रणालीहरू प्रतिस्थापन गर्न एकदमै लागत प्रभावी विकल्प हुन सक्छ। ZhongLi प्याकेजिङ्ग उपकरणको ज्ञानयोग्य कर्मचारीले तपाइँको हालको प्याकेजिङ्ग उपकरण अपग्रेड गर्न अप्ठ्यारो र फाइदाहरूको मूल्यांकन गर्न दिनुहोस्। हामी प्रदर्शन सुधार गर्न र आफ्नो प्याकेजिङ्ग मशीनरीको उपयोगी जीवन लामो गर्न उपकरण उन्नयनको व्यापक वर्गीकरण प्रदान गर्न सक्दछौं।
ऊर्ध्वाधर तकिया बैग प्याकिङ मसालेको लागि 5.5KW पीएलसी सर्वो प्रणाली
पाउडर एगेर भरने मिसिन
रोटरी फल रस प्याकेजिङ्ग मिसिन तरल भरने ऊर्जा बचत
क्यान्सर थैली प्याकिंग मिसिन बहुहेड्स वजन weypack पैकिंग मिसिन संग